बुहारी सबै चाहन्छन, तर छोरी जन्माउन कोहि चाहदैनन् । – ताजा समाचार
बुहारी सबै चाहन्छन, तर छोरी जन्माउन कोहि चाहदैनन् ।
भगवान युधिष्ठिरले भन्नुभएको थियो अरे!
मर्नु सबैले पर्छ ,यो शाश्वत सत्य हो तर पनि कोहि पनि मर्न चाहदैनन् ।
खान सबै चाहन्छ्न,तर खेती गर्न कोहि चाहदैनन् ।
पानी सबै चाहन्छ्न, तर पानी बचाउन कोहि चाहदैनन् ।
दुध सबै चाहन्छन, तर गाई पाल्न कोहि चाहदैनन् ।
शितल सबै चाहन्छन, तर रुख रोप्न कोहि चाहदैनन् ।
बुहारी सबै चाहन्छन ,तर छोरी जन्माउन कोहि चाहदैनन् ।
खुशी कहाँ खोज्ने त ? खुसी हुनका लागी जान्नैपर्ने केहि महत्वपूर्ण कुराहरु